टिलर्सनको उत्तराधिकारीमा अब को ? ट्रम्पले गरे यस्तो घोषणा
वासिङटन, २९ फागुन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मङ्गलबार अमेरिकी विदेशमन्त्री रेक्स टिलरसनलाई पदबाट हटाइएको घोषणा गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी कुटनीतिज्ञ तथा विदेश मन्त्रीका रूपमा टिलरसनले गरेको कार्यका लागि धन्यवाद दिँदै उहाँको स्थानमा अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय (सिआइए) का प्रमुख माइक पोम्पेओलाई नियुक्त गरिने ट्वीटर सन्देशमार्फत जानकारी गराउनुभएको छ ।
“विदेशमन्त्रीका रूपमा गरेको योगदानका लागि रेक्स टिलर्सनलाई धन्यवाद,” ट्रम्पले आफ्नो ट्वीटर पेजमा लेख्नुभएको छ ।
अमेरिकी इतिहासमा नै सिआइए प्रमुखको जिम्मेवारी गिना हास्पेललाई दिइएको राष्ट्रपति ट्रम्पले सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँ अमेरिकी इतिहासमा सिआइए प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पहिलो महिला हुनुहुनेभएको छ ।
“टिलर्सनको उत्तराधिकारीका रूपमा सिआइएका निर्देशक माइक पोम्पेओ छिट्टै अमेरिकी विदेशमन्त्री बन्नुहुनेछ । ”
टिलसरसनसँग काम गर्ने सिलसिलामा वैचारिक भिन्नता देखिएकोले उहाँलाई विदेशमन्त्री बनाइराख्न सम्भव नभएको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सञ्चारकर्मीसँग बताउनुभयो ।
ट्रम्पले भन्नुभयो, “इरान आणविक सम्झौता मेरो विचार सकारात्मक छैन तर टिलरसनले यसलाई ठीक भन्नुहुन्छ । कि सम्झौता भङ्ग गर्नुपर्ने कि त अन्य केही समाधान सोच्नुपर्ने मेरो विचार हो । तर उहाँले केही फरक सोच्नुभयो । त्यसैले हामीले सहकार्य गर्न सकेनौ ।”
भारतीय एक मतदाताले गलत भोट हालेको आवेगमा आफ्नै औँला काटे
श्रीलंकामा भएको शृंखलाबद्ध विस्फोटमा मर्नेको संख्या १३८ पुग्यो
शारीरिक सम्पर्कपछि कतै तपाईं यस्तो गल्ती त गरिरहनुभएको छैन
झुक्किएर भाजपालाई भोट हालेपछि औंला काटे यी व्यक्तिले
श्रीलंकाका विलासी होटल र चर्चहरूमा विस्फोट, कम्तीमा ५० जनाको मृत्यु
भाजपाविरोधी हार्दिक पटेलको चुनावी कार्यक्रममा कुर्सी हानाहान
आरोहीको ओइरो, ४८ करोड बढी रोयल्टी उठ्यो काठमाडौं- यस वर्षको वसन्त ऋतुमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि विभिन्न मुलुकका आरोहीको उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ । यस यामको हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिने आरोहीको सङ्ख्...
नेकपामा केन्द्रीय सदस्य हुँदाहुँदै ८ नेता बने जिल्ला सचिव !
कांग्रेस कमजोर प्रतिपक्षी होइन : देउवा
सन्दर्भ विश्व पुस्तक दिवस : पुस्तक नीति अझै बनेन
ओलीको बोली : कांग्रेस कहाँ पुग्यो ? राजतन्त्र फर्काउने सपना देख्दा विचित्र लाग्छ !
नयाँ वर्षलाई समय सिँढीको कसीमा नियाल्दा
चाकडीमा व्यस्त हाम्रा युवा नेताहरू कन्हैया कुमार जस्तो कहिले बन्ने ?